OakLodge | Ibhafu eshushu + Iseli yeWayini | IRetreat yaBucala
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguKenneth
I-Oak Lodge kulapho kungqubana khona i-coy-cottage kunye nemizi-mveliso yanamhlanje. Intsha tsha kwaye iyafumaneka ukuba uzonwabise. Yonwabela ukugqabhuka komlilo wangaphandle ngelixa uhleli kwindawo yakho yobumnandi be-aqua spa. I-spa yethu 'yeTwilight Series' ibandakanya iijethi zonyango ezingama-35, iingxangxasi kunye ne-LED. Zithobe kwindawo yokulala etofotofo edlula umgangatho wehotele. Indawo eziko kunye nemithombo yeendaba iqinisekisa ukuba uyakonwatyiswa xa ungekho ngaphandle-ujonga ubuhle beMuskoka!
Iwayini, yidla kwaye uphumle.
Umntu omdala kuphela. Akukho zilwanyana zasekhaya.
Amanyathelo ukuya echibini iMuskoka, iMuskoka Wharf, iinqanawa zokuhamba ngeenqanawa kunye neelwandle ezinesanti. Iindawo zokutyela zaseWaterfront, iivenkile, ivenkile ephakathi edolophini kunye nebala legalufa.
IKayak kunye nerenti yezikhephe ziyafumaneka kumashishini asekhaya arentisayo. I-cellar yangasese yewayini kunye nendawo yomlilo yaseNapoleon iya kuqinisekisa ukuhlala ukuphumla.
4.91 · Izimvo eziyi-235
I-Warf yaseMuskoka ikude. IMuskoka Bay (ibala legalufa elaziwayo kuzwelonke) likude. Indawo yokutyela yaseWaterfront kunye nerenti yezikhitshane zizinyathelo ezikude ... ke suka uhambe, phumla kwaye wonwabe.
Umbuki zindwendwe ngu- Kenneth
Ifumaneka 24/7 ukunceda iindwendwe zethu. Qhagamshelana nangaliphi na ixesha, silapha ukunceda!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Gravenhurst